Education – The Voice Journal
စင်ကာပူကို ကျော်ချင်လား။ အောက်စ်ဖိုဒ့်ကို သွားပါ။
ပညာသင်ဆု စကားဝိုင်း – ၄
နိုင်ငံခြားပညာသင်ဆု လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးချင်သည့် နောက်တစ်ချက်မှာ အဆက်အသွယ်ကိစ္စဖြစ်သည်။ ပညာရေး၊ လူမှုဆက်ဆံရေးတွင် အဆက်အသွယ်ဆိုသည်မှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ရှိပါသည်။ ဆိုးတာလည်း ရှိသည်၊ ကောင်းတာလည်း ရှိသည်။ အဆက်အသွယ်ဟုဆိုလိုက်လျှင် အချို့သော မြန်မာတို့တွင် မိမိအတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မည်နည်း၊ မိမိကဘာပေးရမည်နည်း စသည့်...
ပညာသင်ဆု စကားဝိုင်း – ၂
ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရာတွင် အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုမှာ ရင်းမြစ်များကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချရန်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်း နိုင်ငံခြားပညာသင်ဆု ရချင်ပါသည်။ အပြည့်အဝနိုင်ငံခြားပညာသင်ဆု ရရှိခြင်းဆိုသည်မှာ အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ အချိန်တန်လျှင် လစဉ်ကိုယ့်ဘဏ်အကောင့်သို့ ထောက်ပံ့ ကြေးငွေများ ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းစာတွင် အချိန်ပြည့်အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။ ကျောင်းတက်ရင်း ခရီးများသွားလာနိုင်သည်။...
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ရနောင်းရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ ကလေးငယ်များသည် ပညာရေးဌာနများ ပိတ်ထားသည့်အတွက် ပညာဆက်လက်သင်ကြားရေး အခက်အခဲဖြစ်နေသည်ဟု ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းဌာနက ရေးသားသည်။ ယင်းသို့ကြုံတွေ့နေရသည့် အခြေအနေမှ ကလေးများ ပညာပြန်လည်သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ်သမားနှင့်...
ပညာရှင်တို့အတွက် အရေးပါအရာ သို့မဟုတ် Profession နှင့် Passion
Profession သည် သက်မွေးပညာလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးပညာဖြင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုမည့်သူတိုင်းအတွက် လွန်စွာအရေးပါလှပါတယ်။ အပ်ချုပ်သမားအနေနှင့် အင်္ကျီဒီဇိုင်းချုပ်သားချုပ်ရာ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးကြီးကြီးနှင့် အင်္ကျီအထည်တို့ကို ချုပ်ခွင့်ရပါတယ်။ ရှေ့နေသမားက တရားဥပဒေဆိုင်ရာများ၊ အမှုသွားအမှုလာများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ဗဟုသုတကြွယ်ဝမှု၊ အတွေ့အကြုံများမှုအပေါ်မူတည်ပြီး မြင့်မားသည့် ဉာဏ်ပူဇော်ခကို ရကြပါတယ်။...
ယခုနှစ်သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက် ငါးရက်နှင့် တန်ဆောင်တိုင်ပိတ်ရက် လေးရက်အဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၉ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အမိန့်ကြေညာစာအမှတ် (၄/၂၀၁၉)အရ ယခုနှစ်တွင် သီတင်းကျွတ်ရုံးပိတ်ရက်ငါးရက်ဆက်တိုက်နှင့် တန်ဆောင်တိုင်ရုံးပိတ်ရက်လေးရက်ဆက်တိုက် ပိတ်ပေးမည်ဟု ည ၈ နာရီ မြန်မာ့အသံတွင် ကြေညာသည်။ ယခုနှစ်အတွင်း အောက်တိုဘာလ ၁၁၊ ၁၂၊...
အမိနိုင်ငံ၏ လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနှင့် တတ်စွမ်းသည့်ဘက်က တစ်ထောင့်တစ်နေမှပါဝင်ဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်က ကျွန်တော် စတင်စိတ်ကူးခဲ့မိပါတယ်။ ထိုသို့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ အုတ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်ပမာ ပါဝင်အားဖြည့်နိုင်ဖို့ လူငယ်များအတွက် နေ့စဉ်ပုံမှန်အကျိုးပြုမှုတစ်ခုခုကို စတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစိတ်ကူးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ အကျိုးပြုနိုင်သည့်...
ရာပြည့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရင်ခွင် ခိုဝင်လာကြမယ့် သားငယ်သမီးငယ်များအတွက်
၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကို ရွေးချယ်ကြရတော့မယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကို ရွေးချယ်ရာမှာ သားတို့သမီးတို့ရဲ့ ဝါသနာဗီဇအရ မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ဖို့ အလွန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဝိဇ္ဇာနဲ့သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေမှာ ထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ထူးချွန်ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေကို မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို...
Articles / Education / Special Reports
အခြေခံပညာဦးစီးဌာနက စနစ်အဟောင်း ၊ သင်ရိုးအဟောင်းများကို မြေလှန်ရန် ကြိုးစားနေပြီး KG+ 12 ပညာရေးစနစ်သစ်ဖြင့် မြန်မာ့ပညာရေးကို သွေးသစ်လောင်းရန် ပြင်ဆင်နေသည်။ ယင်းစနစ်သည် ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်တွင် အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော် ပြီးစီးမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက...
Education / lotaya / News
၁၀ တန်းအောင်လက်မှတ်နှင့် အမှတ်စာရင်းအတု ပြုလုပ်သူများကို အမှုဖွင့်
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၄ ၁၀ တန်းအောင်လက်မှတ်အတု၊ ၁၀ တန်းအမှတ်စာရင်းအတုနှင့် တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်/ ဒုတိယနှစ်အောင်လက်မှတ်အတုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် Five Four Two Co,Ltd. (အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး ကုမ္ပဏီ) မှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အပေါင်းပါများ...
Articles / Education / lotaya / Perspective
၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများကိုဇွန်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ရာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဖြေဆိုသူ ၈၅၁,၅၂၄ ဦးရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်သူ ၂၆၇,၆၉၆ ဦးရှိခဲ့ပါသည်။ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၃၁.၄၄ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးပျှမ်းမျှ အောင်ချက် ၃၁ ဒသမ ၄၄...